Onkoloolessa 27, 2018
Footoo warra baqatee ammatti hin arganne.Dubra Booranaa ta gammee tanaan beekan. photo/file
"Waraanii Liyuu Hayil bara kana cufa olluma Booranaa barbaadee hadhaa bahe"
Waraanii Liyuu Hayil akka ganna sadii asitti nama kuma hedduu godina Gujii Bahaa aanaa Liiban keessaa baqachiise. Warrii waraana duraa goree amma ganda Simminto,Qurquraa jiru akka bulchaa ganda sunii jedhutti rakkoo hamaamtuu keessa jira. Simmintoo abbootii warraa hedduutti walti qubate.
Qaxuu Mallichaa, haadha ijoollee sadii: Gumaa qabaannee waan aananii hin dubannuu, manii keennalleen baala rukeessaa. Rakkoon jajjabdu nu keessa jirru liqimsaa fi dheebuu jetti.
Dhokkoo Xuunnichaa, bulchaa Simmintooti:Liyuu Poolsii yoma cufaa ollaa Booranaa barbaadee hadhaa amma abbaa warraa 300 ka namii1, 500 tahu keessa jiraatu ardaa Simmintootti walti dachahee jira.“Namii guyyaa afur bisaaniiyyuu hin arganne “biiroo godinaatii fi aanatti iyyannee dadhamnbee,kaleellee dhaqee gaafadhe.”
Dheengee Mallichaa, jaarsa ganna 60: hori nyaaphatti nurraa fudahtee kaan oolaatti nurraa fixee, lafa teenna irraa yaahuu dinnee irratti beeloomnee dheebochuutti jiraa jedha.
Warrii akkana rakkoo himachuutti jiru,Boorana aanaa Liiban keessaa lola Liyuu Poolis ka ji’aan duraa irraa hiiqee Simmintootti walti qubate.
Akka bulchaan ganda Simmintoo, aabba Dhokkoo Xuunnichaa jedhetti dhiirtii ammallee salfaa jirtii,waraana Liyuu Poolis ufi irraa eeguutti jirti,namii lola duraa gorelleen lafa ufii irraa yaahuu diduuf fulaa durii jiruu irraa yaahe.
Fulaan akkana namii waraana duraa baqateef godina Gujbii Bahaa aanaa Liiban akka bulchaan ganda Simmintoo jedhetti Qaxxee Waaree,Hara-Haaboruu, Handaraka,Jirma,Elelllee Guddaa fi Elellee Diqqaa,Kooba-Qulloo,Hara-Aadee fa. Namii armatti qubate kun akka jecha isaatti nyaataa dhugaatiillee dhabee rakkoo guddoo keessa jira.
‘Waraanii naannoo Somaalee Liyuu Poolis baruma kana cufaa ollootuma Booranaa barbaadaa hadhaa bahe’
Akka aabba Dhokkoon jedhutti waraanii Liyuu Hayil kun yoo cufa ollootuma Booranaa barbaadee hadha “ganna sadi asi akkanuma nu hadhuutti jira.”
Waraanii ji’aan duratti nama baqachiise kun “guyyaa sadii nu hadhee amma waggaa sadeessoo ejjinaa egii baqannee asi dhumnee amma ji’a tokko ejjina.”
Warrii arma jiru kun nyaataa dhugaatii dhiisii gaaddisa dansaayyuu hin qabu.
“Namii womaa hin qabu. Teendhee hin qabu.Bokkaa hagayyaatii fi dhaamochallee keessuma oolee bula.Namii dhufee nu laale tokkolleen hin jiru.”
Akka bulchaan gandaa Simmintoo jedhetti Boorannii amma beelaa fi dheebuu keessa jiru kun moggaa lafaa jiraa,waraana Liyuu poolisiitiin walti aanaa taatullee lafa ufi irraa baqachuu diduuf beelaa fi dheebuun rakkachuutti jira.
“Namii beelaan gaggabuutti jiraa edallee midhaan xaasaan walii qoodaa wal qulaamsaa jenneen,” jedha aabba Dhokkoon.
Fulaan dhibiin namii waraana Liyuu Poolis ka ji’aan duraa irraa hiiqee walti qubate akka bulchaan gandaa jedhutti Dhungoo, Haya-Aananii,Caffaa-Hiddii, Ijaaruu Funnaan-Giree,Halooyye, Malkaa-Gubaa Deeressaa fa.
Yoo walti deebisan namii waraanii Liyuu Poolis ka naannoo Somaalee dhfuee ji’a lamaa sadiin duratti lole baqachiise akka bulchaan ganda Simmintoo mala muree jedhetti 5,800 hinuma taha.
Amma waraana Liyuu Poolisiin wal hadhuutti jiraacuu baatanillee diqquma tokko wal irraa hiiqanii gamaa wal doofatan..Namuu mishigi qabatee wal eegataa jedha aabba Dhokkoon.
“Dhiyoollee waraana Liyuu Poolis 300 asi buusanii kaleellee meeshaa waraanaa gugurdaa dhaanaa bule waraanii sun.”
Rakkoo nyaataa fi dhugaatii biyyiti himattu tana akka itti aanaan Koomishineera Koomishiinii Sodaa Balaa Oromiyaa obboo Garramuu Oliqaa jedhutti koomishiinii isaani gabaasa hin qabu ammoo rakkoo beelaa fi dheebuu Boorana aanaa Liiban ammoo faanuma buuna jedha